Alarobia 19 Jiona 2019. – FJKM
Asan’ny Apostoly 19.23-41
Tsarovy ireto :
1-Tsy afa-misaraka ny finoana kristiana sy ny sampy
Ady mangotraka no nisy teto . Rehefa nitory ny fivavahana marina ry i Paoly dia mba nitsangana niaro ny azy koa ireo mpanompo sampy . I Jesoa dia efa niteny mazava hoe : »Tsy misy mahay manompo tompo roa (Mat 6.24). Ny mampalahelo dia ny mahita olona mitonona nho kristiana nefa mbola manompo sampy ihany .
2-Mafana fo fatratra hiaro ny azy ny mpanompo sampy
Mariho ny fientanan’izy ireo , noantysoantso efa ho adiny roa be izao hoe: lehibe ny dianan’ny Efesiana (and34) . Marina fa hafanampo anjambany no hita eto . Anjambany satria tsy fantany akory izay ataony (and32), kanefa dia hafanampo ihany . Mba ahoana ny hafanamponao kristiana raha mitaha amin’izany ? Fa indraindray toa ambakan’ny mpanompo sampy isika .
3-Sarobidy amin’ny olona noho ny fanahy ny vola
Rehefa tena halalinina ny anton’ny hetsika rehetra notarihan’i Demetrio teto dia izao ihany : tahotra ny ho very tombotsoa . teo tokoa ny fitiavany sy ny fifikirany tamin’ny sampiny , dia ilay dianan’ny Efesiana , fa teo indrindra koa ny harena azony vokatr’izany . Io no natahorany mafy ho very raha tonga kristiana ny olona maro . Ary moa tsy mampahatsiaro antsika ilay tantaran’ny nanafahan’i Jesoa ilay demoniaka tao Gadarena va izany , ka nahatezitra ny tompon’ireo kisoa nidiran’ny fanahy ratsy ka nirifatra tany amin’ny hantsana ka maty tany ? Tsy ilay lehilahy velona no lehibe taminy fa ny kisoany maty . Fieritreritra izany !